Kaominin’i Ranomafana 2500 ariary ny CVO
Hatramin’ny fotoana nanaovan’ny filoham-pirenena fa anaty fahamehana ara-pahasalamana isika dia nandray fepetra avy hatrany ny kaominin’i Ranomafana, hoy ny ben’ny tanana ao an-toerana, Barthelemy Samuel Ravelonasy.
Mihetsika ny komity misahana izany manentana sy misava ary manasazy ireo olona tsy manaja izany. Lafo anefa ny vidin’ny CVO satria dia 2500 ariary ny tavoahangy. Nisy, noho izany, ny antso natao tamin’ny governoran’i faritra Atsinanana, ary nisy ny ezaka nizarana izany na dia kely dia kely aza no azo, hoy izy. 700 isa eo ny “pack familial” na ilay fonosana isan’olona. Ny fizarana isan’andro kosa dia olona miisa 800 eo no tonga maka izany isan’andro. Etsy ankilany, hoy izy, dia mamely koa ny tazomoka ka antony mbola hanohizanay ny fangatahana amin’ny fanjakana ny amin’ny mbola hanohizany izay famatsiana Covid organics izay. Nisaorany koa ny fiadidiana ny distrikan’i Brickaville izay namatsy fanafody ao an-toerana.